Warbixin cusub oo ku saabsan Hyundai iyo Apple Car: 2024 waxay noqon doontaa sanadka wax soo saarka | Waxaan ka socdaa mac
Maalmo ka hor waxaan kuu sheegnay xaqiijinta wadahadalka jira inta udhaxeysa Hyundai iyo Apple soosaarka iyo dhismaha Apple Car. Tan iyo markaas, saamiyada Hyundai waxay kaceen 20%. Warbixin cusub ayaa muujineysa in wax soo saarka, ugu yaraan Mareykanka, dhici doona 2024.
Wada shaqeynta la xaqiijiyey ee u dhaxeysa Hyundai iyo Apple ee soosaarida Apple Car ayaa hirgeli karta sanadka 2024. Macluumaadkan cusub waxaa laga soo qaatay warbixin cusub oo lagu hubinayo ugu yaraan Mareykanka, gaariga Apple wuxuu ku dhici lahaa suuqa sanadkaas.
Xanta iyo saadaashii ugu dambeysay ee falanqeeyayaasha sida Kuo ayaa dhigay bixitaanka gaariga ee 2025. Sikastaba Appleinsider waxay ku dhawaaqaysaa ilaha warshadaha Korea IT News ee sheeganaya in lammaanaha Apple ay bilaabi karaan sanad ka hor. Waxay u badan tahay sidoo kale Waxaan ka heli karnaa warshadda mas'uulka ka ah wax soo saarka Mareykanka.
Hindisayaashu waxay ku lug lahaan doonaan isu imaatinka baabuurta warshad ku taal Georgia oo ay leedahay shirkadda Hyundai hoosaadkeeda Kia Motors, ama in warshad cusub laga dhiso dalka. Qorshayaasha waxaa la rumaysan yahay inay ku lug leeyihiin soosaarka hareeraha 100.000 oo gaari 2024, iyada oo sanadkii ay warshaddu ka badan tahay 400.000 oo baabuur.
Isku day la doonayo in lagu hagaajiyo gaariga, waxaa la sheegaa in Hyundai iyo Apple ay qorsheynayaan bilow "nooca beta" ee gaariga sanadka 2022.
Waxaan u qaadaneynaa in warbixintan cusub ay sameyn doonto saamiyada shirkada baabuurta soo noqo sida doonista Apple, oo aad ugu dhow bixitaanka Apple Car.
Waxaan sugeynaa 3 sano, horumarka, xanta iyo saadaasha aan ku faraxsanaan doono inaan kuu sheego sida loo soo saaray. Waxaan u hamuun qabaa inaan ogaado waxa Apple Car noqon doono iyo haddii run ahaantii, sida falanqeeyayaashu yiraahdaan istaagi karaa ilaa Tesla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Warbixin cusub oo ku saabsan Hyundai iyo Apple Car: 2024 waxay noqon doontaa sanadka wax soo saarka